How we work? | Handy Web
Home &sol; How we work?
ကျနော်တို့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေကို ရယူလိုပါက Contact us! မှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ တိုက်ရိုက်ဖုန်းဖြစ်စေ၊ အီးမေးလ်ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ လက်ခံရရှိပြီးချင်း ကျနော်တို့ ပြန်လည် ဆက်သွယ်ပါ့မယ်။
ငွေပေးချေခြင်းကို နည်းလမ်းနှစ်ခုနဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုက လက်ငင်းငွေချေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ရုံးခန်းမှာတိုက်ရိုက်ငွေချေနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ ဘဏ်မှတဆင့် ငွေလွှဲခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်ကနေပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ်အကောင့်ဆီသို့ ငွေလွှဲပို့ပေးပြီး ငွေပို့ဘောင်ချာ ဓာတ်ပုံကို Facebook massage သို့ဖြစ်စေ၊ email သို့ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဘဏ်ကတဆင့် ငွေလွှဲနိုင်မည် နည်းလမ်းများကို ဤတွင်နှိပ်ပြီး ကြည့်ရှု့ပါ။
Translation / Transcription ၀န်ဆောင်မှုများအတွက် ငွေချေခြင်း။
ဘာသာပြန်စာမူ သို့မဟုတ် အသံဖိုင်ကို ရရှိပြီဆိုပါက နမူနာ တစ်မျက်နှာ သို့မဟုတ် နှစ်မျက်နှာ၊ ဆယ်မိနစ်စာအသံဖိုင် ကို ပြန်ပါမယ်။ ပြီးလျှင် လူကြီးမင်းကို ပြန်ပို့ပေးပြီး လူကြီးမင်း စိတ်ကျေနပ်ပါက စရံငွေ တ၀က်ကို ဘဏ်ကတဆင့်ပေးချေရပါမယ်။ လုပ်ငန်းပြီးစီးပါက ဘာသာပြန်ထားသော စာ၊ သို့မဟုတ် အသံဖိုင်မှရေးသားထားသောစာများကို လူကြီးမင်းထံသို့ အီးမေးလ်မှတဆင့် ပြန်ပို့ပေးပြီး စိတ်ကျေနပ်ပါက ကျန်ငွေ တ၀က်ကို ဘဏ်ကတဆင့်ပေးချေပါ။
Graphic Design များအတွက် ငွေချေခြင်း။
လူကြီးမင်း ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး ဒီဇိုင်းပုံဖန်တီးပါမယ်။ ပြီးလျှင် ပုံကြမ်းကို လူကြီးမင်းထံသို့ ပြန်ပို့ပေးပြီး လူကြီးမင်း ကျေနပ်သည်အထိ ပုံဖော်ပေးပါမည်။ လူကြီးမင်း ကျေနပ်သည့် ပုံစံသို့ရောက်လျှင် ဘဏ်မှတဆင့် ငွေပေးချေပါ။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်တို့မှ အရည်အသွေးမြင့် ပုံကို ပြန်လည်ပို့ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၀က်ဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ စရံငွေတ၀က် စလွှဲပေးရပါမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ လူကြီးမင်း လိုချင်တဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်နာမည်ကို ၀ယ်ယူပေးပြီးနောက် စတင်ရေးဆွဲပါမယ်။ ထိုအခါ လူကြီးမင်းနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန် အွန်လိုင်းကဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ရုံးခန်းမှာဖြစ်စေ၊ လူကြီးမင်းအဆင်ပြေတဲ့ တစ်နေရာရာမှာဖြစ်စေ တွေ့ဆုံပါမယ်။ လူကြီးမင်းလိုချင်တဲ့ ပုံစံရပါက ကျွန်ုပ်တို့ စတင်ရေးဆွဲပြီး အကြမ်းကို လူကြီးမင်းကို ပြသပါမယ်။ ပြီးနောက် လူကြီးမင်းစိတ်တိုင်းကျသည်အထိ ပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ စိတ်တိုင်းကျပါက ကျန်ငွေ တ၀က်ကို ဘဏ်ကတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ လွှဲပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့က လူကြီးမင်းရဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်ကို အပ်နှံပါမယ်။
ကျနော်တို့ လူကြီးမင်းအတွက် အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်များမှာ လူကြီးမင်းရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို သိရအောင်၊ လူကြီးမင်း စိတ်ကျေနပ်မှုရအောင် ဖုန်းကသော်လည်းကောင်း၊ အီးမေးလ်က သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မှုတွေလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းလက်ခံသည့် ၀က်ဘ်ဆိုက်၊ ဒီဇိုင်းရပါက ကျနော်တို့အနေနဲ့ Soft Copy File ကို အီးမေးလ်က တင်ဆင့်ဖြစ်စေ၊ ကျနော်တို့ ရုံးတွင် Memory Stick ဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၀က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပါက လူကြီးမင်းဆီသို့ Account Name နဲ့ Password ပေးပို့ပေးမှာဖြစ်ပြီး လူကြီးမင်းက ၀င်ရောက် စီမံခန့်ခွဲလို့ရပါတယ်။